हाम्रा नेता कहिले सगरमाथामाथि, कहिले केचनामुनि ! | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतबार, कार्तिक २, २०७७ मा प्रकाशित
मन्त्रिमण्डल विस्तार भो अरे हो भिरघरे !
हो त काका ! अस्ति झुम्री काकीले भनेकी थिइन नि तीन जना मन्त्री थपिन्छन् भनेर । तिमी चाहिँ पत्रकारको कुरा पत्यार बस्यो ।
नेपालका पत्रकारले भेउ पनि पाउँदैनन् ।
मैले त पत्रकारहर्ले लेखिसकेपछि होला भनौँ नि हौ भिरघरे ! होइन कतिपयले अब हुने मन्त्रीहरू भनेर लिष्ट नै पो देका थिए त ! हैट मान्छेलाई त पागल बनाउने रान फटाहा हर्ले ।
के नाप्पियो भन्छेस् झुम्री । हेर्दै जा हाम्रो प्रचण्ड पनि चुप लागेर बस्ने मान्छे होइनन् । कहिले सगरमाथा जस्तो उचालिने र कहिले केचना जस्तो थचारिने प्रचण्डको बानी हो ।
काका आफैँ विश्लेषन गर्नु पर्छ । मौजुदा मन्त्रीहरूमा फलानो फलानो अयोग्य, यो र ऊ त्यो योग्ये ! अनि अब बन्ने मन्त्री अघोर राम्रो हुने फलानो र ढिस्कानोले त मन्त्री बन्नासाथ धर्ती उचाल्छ भन्ने पत्रकार नाथेहर्को कुरा पत्याएर हुन्छ । अब आउने चुनापसम्म यिनारलाई काम गर्न दिनुपर्छ । त्यसपछि चुनापले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ ।
कुरो त मुनासिपै हो भिरघरे । तर कसको के विश्वास र ! हेर्न हाम्रै कर्णाली प्रदेशको थाप्लोमा अविश्वासको प्रस्ताव प्रहार भो । भोलि फेरि अर्कोतिर बन्चरो हान्न बेर लाउँदैनन् । पूर्व एमालेहर्ले निउँ खोज्न थालेका छन् । हामीलाई गन्दैनन् ।
हौ काका ! तिमीलाई जवाफ त काकीले दिने थिइन् । खै काकी !
म च्या लेर आम्दै छु है भिरघरे ! लु च्या खाँदै गफ गर्ने । तिमार्को सप्पै कुरा सुनेँ मैले । यी बुढालाई के जवाफ दिनु ! अझै माओवादीको धाक दिन्छन् । अहिले एमालेले साथ दिएको छ । यही नै बढी भै रा’ छ !
गफ नगर् झुम्री ! तँ एकता विरोधी भाकी छस् । हामी नभए यो सरकार पनि बन्ने थिएन । अहिले हाम्रो प्रचण्ड काम्रेडले अलि पर्ख र हेरको नीति लिएर पो ! नत्र वालुवाटारबाट लखेटिने थिए । हैन यो देशमा ओली बाहेक कोही छैन ? तीन जना मन्त्री आफ्नै राखे । यता कर्णालीमा झन्नै स्वाहाः पारेका ! पत्रकार बुङ्गा चैं नभा’ जति थाहा पाउँदा रा’न, भा’जति केही थाहा नपाउँदा रा’न । मुलाङहरू !
काका ! पहिला २३ प्रतिशत माओवादीलाई भनेको थियो । अहिले ४० प्रतिशत देका छन् । यही नै ठूलो कुरो कर्णालीको मुख्य मन्त्री पनि ओलीले जबरजस्ती तिमार्लाई देको । होइन भने यमलाल कडेंल नै हुन्थे । अर्को कुरा तिमी जस्तो राजनीति बुझेको मान्छे पत्रकारको विश्वास गर्छौ, अनि आफ्नो अनुकूल ब्याख्या गर्छौ । अबको चुनापमा हेरौंला तिमार्लाई ! एकलौटी हाम्रो कांग्रेसले जित्छ ।
लु तैंले पनि दिउँसै सपना देख्न थालिछस् । पहिले शेरबहादुर र रामचन्द्रलाई मिला, अनि झापाको विश्वप्रकाश र कृष्ण सिटौलालाई मिला, संखुवासभाको तारामान र दीपक खड्कालाई मिला । धेरै जिल्ला किन जानु यही हाम्रो डोल्पाको तँ र सिस्ने कान्छो मिल्न सकेका छैनौ । कांग्रेसले जित्ने कुरा गर्छ !
हैन बुढा ! नेकपाको पनि राम्रो छैन है । ओलीको झापामा आफ्नो क्षेत्र सुरक्षित होला अरु ठूला नेताको त देखिदैन । बरु हाम्रो डोल्पाको धनबहादुर बुढा पो दह्रा छन् । अनि काँग्रेसको पनि राम्रो देखिदैन । अरु पार्टी पनि उत्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
काकाले केही हदसम्म त ठीकै कुरो गरे । तर, अब कर्णालीमा धेरै पानी बगिसक्यो । एमाले र माओवादी चुनापसम्ममा एउटै गोठमा बस्तैनन् होला ! पूर्व माओवादी र पुर्व एमाले भन्न छोड्दैनन् ।
आ भिरघरे ! छोड्दे यस्ता कुरा ! बरु मन्त्रिमण्डल बिस्तारबारे प्रचण्ड, माधव नेपाल के भन्छन् अरे ! त्यो चाहिँ सुना न ।
कोठाभित्र पाखुरा सुर्केर बस्नु बाहेक अरु के छ र ! शहरी विकास मन्त्रालय चैं दिन्छन् कि भन्ने आश थियो होला । बिचरा ! दुवै जना हिस्रिक्क परे । जे गरेका छन् ओलीले ठीक गरेका छन् । अरु तित्रा जस्तो कराइरहन्छन्, ओली आफूलाई लागेको काम गर्दै गर्छन् ।
त्यही त अनौठो छ भिरघरे ! नेताहरूसँग सल्लाह गरेर मन्त्रीहरू चेनफेन गर्ने भनेर कुरा मिलेको समाचार पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन पोर्टलहरूमा आ’को थियो । मैले त होला ता नि भनेँ । भरे त …….!
काका ! पार्टीको निर्णय एउटा कुरा हो, सरकारको निर्णय अर्कै कुरा हो । म कांग्रेस भए पनि ओलीले जे गरे ठीक गरे भन्छु । हाम्रो देउवा दाइ प्रधानमन्त्री भए भने रामचन्द्र, शेखर, सिटौला जस्तालाई सोध्ने प्रश्नै आउँदैन । आफूलाई मन लागेको सांसदलाई मन्त्री बनाउँछन् । आफूलाई काम गर्दा सजिलोका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउने हो क्या काका !
ल यस्तो कुरो चैं नगर भिरघरे । अनि हाम्रो प्रचण्ड, माधव नेपालहरू चैं सही छाप ठोक्न मात्रै बसेका हुन् त !
हो बुढा, हो ! केही गर्ने त ठाउँ र खुवी हुनुपर्छ । आफैँ सबै ठाउँ मेटाइहाले, खुवी कमाइहाले । अनि गर्नु के !
झुम्रीले बेठीक कुरो त गरेकी होइन, तर मेरो भने चित्तै बुझ्दैन । यिनारु चुपचाप बसेको देख्दा त केही छ जस्तो लाग्छ । छाडौँ त आफैंलाई खाने डर, नछाडौँ त कति समाइराख्ने ! पसिना छुटेको छ प्रचण्ड र नेपालको । उता झलनाथ, बामदेव सकिँदै गए यता यिनारु मक्किँदै गए ।
हो काका, अहिले चाहिँ ठीक भन्यौ ।
ठीक र बेठीकको कुरो होइन भतिज । यही पारा हो भने कुन चैं दिन पार्टी न सार्टी भनेर हाम्राहर्ले काचाक्कुचुक पार्छन् ।
लु काका, उहिलेको कुरा खुइले । अहिले त जल्ले हान्यो, उल्ले जान्यो । लौ काका–काकी, म घरतिर लागें । अर्को आइतबार भेटौंला ।
यो देश नेपालमा